Akụkọ - Tụnyere nke ụzọ usoro mmepụta ya na OPlọ ọrụ BOPET
Ka ọ dị ugbu a, ụzọ usoro mmepụta abụọ dị iche iche dị na ụlọ ọrụ BOPET, otu bụ ịkpụ nsị, onye ọzọ na-agbaze.
Tupu 2013, ahịa na-abụkarị dabere na usoro ịkụ, ebe ọ bụ na mgbe afọ 2013 gasịrị, a na-ewebata usoro iwu. Dabere na ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ Zhuo Chuang, na njedebe nke ọnwa Septemba 2019, ike mmepụta BOPET dị na China bụ nde 3.17, ikike nrụpụta nke ngwa ngwa agbazere ngwa ngwa ruru ihe dịka 30% nke ngụkọta mmepụta, yana 60 ọzọ fọdụrụnụ. % nke ikike mmepụta bụ ngwaọrụ akụrụngwa.
Nke nke agbazeze akara
IkikeTọn / Afọ）
Ọnụ ego nke ịkpụ mma dị ala karịa nke agbaze agbaze, ihe dị ka yuan 500 kwa otu. Ya mere, o nwere uru dị ukwuu n'ọhịa gbasara ihe nkiri niile. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ atọ kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ nwere akụrụngbe iwu anọ, Jiangsu Xingye, Yingkou Kanghui bụ ndị na-eweta 3 na ụlọ ọrụ BOPET na China, na ahịa nke ihe nkiri nkịtị bụ ọtụtụ. Site na nrụpụta nke Ningbo Jinyuan, Fujian Baihong, Zhejiang Yongsheng na Shuyang Genzon sonyeere ụlọ ọrụ ahụ, e guzobela ụdị asọmpi ọhụrụ n'ọhịa BOPET, mana uru ịsọ mpi n'ogo pụtara ihe karịa usoro ịkụcha.
E nwere uru na ọghọm dị na usoro abụọ a. Ọ bụ ezie na uru dị na ntanetị ịgbaze na fim nke ihe nkiri niile ka mma, usoro ịkpụ mma nwere uru doro anya na usoro mmepụta yana ịba ụba ngwaahịa. Ka ọ dị ugbu a, ahịa BOPET dị n'usoro a na-agbaze agba dị larịị dị mkpa, a na-ejikarị ngwaahịa BOPET eme ihe n'ọtụtụ nchịkọta. Naanị akụkụ nke ọkpụrụkpụ enwere ike iji n'ọhịa elektrọnik. Kaosinadị, usoro amịpụta nke usoro ịkpụgharị bụ usoro mmepụta fim toro oke. Na mgbakwunye na nkwakọ ngwaahịa nkịtị, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na ọrụ elektrọnik na ọkụ eletrik, ubi na ntinye akwụkwọ bara ụba, ndị otu ahịa dị ike karị.
Site na mmelite nke usoro mmepụta BOPET na mmelite nke teknụzụ, akụrụngwa gbazere kpọmkwem nwere ike imepụta ngwaahịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'okpuru nhazi mbelata ego. Na 2005, site na nkwalite teknụzụ, Fujian Baihong nwere ike ime ka ọkpụrụkpụ nke mmepụta si 75μ ruo 125μ. A ka na-eme atụmatụ maka ihe ọhụụ. N'oge ahụ, ọ ga - enwe ike imepụta ngwaahịa nwere ọkpụrụkpụ nke 250μ na 300μ. Nke a bụ usoro evolushọn na ngwa. Na mgbakwunye, usoro mmepụta BOPET arụpụtakwala mmepe nke ihe ntụtụ: Site na 3.2 mita ruo 8.7 mita ruo mita 10.4. Blọ ahịa China BOPET nke atụmatụ ngwụcha na 3-15 nke usoro mmepụta 10.4, nke ga-eme ka usoro ohuru nke ụlọ ọrụ China BOPET dị ọhụrụ.
Oge nzipu ozi: Ọgọst-21-2020